११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १८:५८
मकवानपुर, ११ फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल सिजन ३’ उपाधी भिडन्तको नजिक बढीरहेको छ । उत्कृष्ट ८ मा छानिएका प्रतियोगीहरु पनि उत्कृष्ट ७ को यात्रा पछ्याउँदै दमदार प्रस्तुतिहरु दिईरहेका छन् । यसैबिच उत्कृष्ट ८ को पर्फोमेन्स राउण्डसमेत सकिएको छ । यस अघिको भिडियोमा हामीले गाला राउण्डको चौथो हप्तामा कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड संयुक्त रुपमा प्राप्त गरेका ४ जना प्रतियोगीहरु फाईनलमा पुग्नसक्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौँ । केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल र मेघा श्रेष्ठलाई संयुक्त रुपमा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । उनीहरुमात्र नभई उपाधीका दाबेदारहरु अन्य ४ जना प्रतियोगी पनि हुन् । यस भिडियो सामग्रीमा फाईनलमा पुग्ने सम्भावना भएका ४ प्रतियोगीहरु रचना रिमाल, नेशन पुन मगर, किरण कुमार भुजेल र मुस्कान रानाभाटका बारेमा चर्चा गरिएको छ । हेरौँ भिडियो–
३) रचना रिमाल– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् रचना रिमाल । गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै उनी चर्चामा छिन् । झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानै उमेरमा संघर्ष गर्न सिकेकी छिन् । मिठो चटपटे बनाउने रचनालाई भद्रपुरमा धेरैले चटपटेवाली भनेर चिन्छन् । सानो छँदा मन्दिरमा भजन गाउने गरेकी रचनाले विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिँदै गीत गाउन थालेकी हुन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दाको समयमा संगीतको कक्षामा भर्ना भए पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । उनको संगीत सिकाईको समय ४ महिनामा मात्र सिमित भयो । संगीतमै करियर बनाउने योजनामा रहेकी रचनालाई संगीतमा लगाव भएका कारण उनका आमाबुवाले समेत साथ दिएका छन् । सबैले चटपटेवाली भनेर चिनेता पनि उनी आफ्नै नामले चिनिन चाहान्छिन् ।
४) मुस्कान रानाभाट– नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् मुस्कान रानाभाट । उनले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म एउटा अवार्ड जित्न सफल भएकी छिन् । उनले गाला राउण्डको दोस्रो हप्तामा ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक’ अवार्ड जितेकी थिईन् । उनी पोखरा निवासी हुन् । नेपाल आईडल सिजन ३ मा फरक प्रस्तुतिहरु दिएर चर्चामा आएकी २२ वर्षिया मुस्कानले संगीत विषयमै स्नातक अध्ययन गरिरहेकी छिन् । ९ वर्षको उमेरमा नै ‘बेबी मुस्कान’ नामक एल्बम निकालेकी मुस्कान सानै उमेरदेखि सँगीतको क्षेत्रमा लागेकी हुन् । सानोमा गाउन नजाने पनि गाउँछु भन्दै अग्रसरता देखाएको उनी सम्झन्छिन् । सानोमा साईबाबाको भजन गाउने गरेकी मुस्कानले साँगितिक परिवारमै हुर्कने मौका पाएकी थिईन् । बुवा साँगितिक बाजाहरु ब्जाउने र आमा गाउने कलामा निपुण भएका कारण मुस्कानले पनि संगीतमा रुचि राख्दै अघि बढेकी हुन् । संगीतकार बन्ने बुवा र आमाको सपनालाई अहिले मुस्कानले अघि बढाएकी छिन् । आफु सहभागी भएको कुनै पनि साँगितिक कार्यक्रममा प्रथम हुने गरेकी मुस्कानलाई उनका परिवारले पनि संगीतमै करियर बनाउन मदत गरेका छन् । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडन सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।